သူငယ်ချင်းရဲ့ရည်းစားဟောင်းနဲ့ တွဲမယ်ဆို အဆင်ပြေပါ့မလား
အပျော်တမ်းတွဲရုံလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းနဲ့လဲပြတ်၊ ရည်းစားသစ်နဲ့လည်း သိပ်မကြာခင် ပြတ်မှာပါပဲ။
အချစ်ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဟဖို့ ခက်ခဲလွန်းတဲ့အရာပါ။ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုချစ်မိမယ်ဆိုတာလည်း ကြိုတင်တွက်ဆလို့မရဘူးလေ။ ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ တစ်ချိန်က ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးသူကိုမှ ကိုယ်က ချစ်ရဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာပါပြီ။
သူငယ်ချင်းရဲ့ရည်းစားဟောင်းကို တွဲမယ်ဆို အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား? ဒါက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးရမယ့်ကိစ္စပါ။ သူနဲ့ အပျော်သဘောမျိုး တွဲကြည့်ချင်တာလား၊ တကယ်ပဲ ချစ်မိသွားတာလားဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ်။ အပျော်သဘော စိတ်လှုပ်ရှားရုံလောက်နဲ့တော့ မတွဲသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အဖုအထစ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပူစရာတွေ၊ ဖုံးကွယ်တာတွေ ကျိန်းသေပေါက် ဖြစ်လာတော့မှာလေ။ စိတ်ခံစားချက်နောက်ကို မလိုက်ပါနဲ့။
တကယ်ချစ်မိသွားတာလား ? သူနဲ့တွေ့ရရင် ပျော်နေတာမျိုးလောက်ကို အချစ်လို့တော့ သတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးအနေနဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှာပါ။ နှလုံးသားထဲက ထုတ်မရလောက်အောင် တွယ်ငြိမိသွားရင်တော့ နှလုံးသားနောက်ကို လိုက်ရတော့မှာပဲ။ အချစ်နဲ့သူငယ်ချင်းကြားမှာ ကိုယ်က အကန့်ခွဲနိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ သူငယ်ချင်းရှေ့မှာ သူ့ရည်းစားဟောင်းနဲ့ကြည်နူးပြနေတာမျိုး မဖြစ်အောင်တော့ ဆင်ခြင်ရတော့မှာပေါ့။ အစပိုင်းမှာတော့ တကယ်ခက်ခဲတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အချစ်ကပဲ အရာရာကို ကျော်လွှားမယ်လို့ ယုံပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကလည်း နားလည်ပေးလာပါလိမ့်မယ်။